Digital Publishing Meets Ecommerce na Zmags Verge
Verge na-ejikọ Ecommerce na Digital Publishing
Wednesday, September 5, 2012 Tọzdee, Septemba 6, 2012 Douglas Karr
Anyị ecommerce onye nkwado, Zmags, ewepụtala onye na-ekiri akwụkwọ ntanetị dijitalụ ọhụrụ. Ederede ™ na-enye ụlọ ọrụ ohere ịgbanwe PDFs ha (yana ọdịnaya ndị ọzọ) ka ọ bụrụ onye na-ekiri ha ebe ha nwere ike kpuchie data, onyonyo, vidiyo, na ikpo okwu ecommerce ha. Enwere ike itinye onye na-ekiri ya na desktọọpụ, mobile na mbadamba nkume site na nchịkọta njikwa dị mfe.
Nke a bụ ezigbo ọganihu na mbipụta dijitalụ, na-enye ụlọ ọrụ ohere iwulite mmekọrịta na ahụmịhe ebe ha nwere ike ire ozugbo. N'oge gara aga, ụlọ ọrụ nwere ike kesaa magazin ya ma ọ bụ broshuọ ya mana ọ dabere na onye na-agụ ya na-alọghachi na ụlọ ahịa n'ịntanetị iji zụta ya. Ọhụụ ọhụrụ a na-enye ụlọ ọrụ ohere ịgbakwunye ọkụ maka ozi nzụta na ọbụnadị na-enye ha ohere ịhazi ọtụtụ ngwaahịa ọnụ.
Site na Zmags Ibe ngwaahịa ngwaahịa
Enwere ike iji ihu igwe juputara na ọdịnaya na ihe onyonyo di omimi, kesaa ma jiri ngwa ngwa pịa ma obu pinye n'ime ụgbọ ibu azụmahịa, niile na-enweghị ka peeji nke reloads ma ọ bụ nweta ume.
Na-ebuli ahụmịhe onye ọrụ aka gafee nyiwe niile iji zuru uru nke iPad HTML5 arụmọrụ, nakwa dị ka smartphones, PC ma ọ bụ laptọọpụ; enwere ike itinye ya na ibe akara Facebook gị.
Zmags naanị Zụọ Anya ịrụ ọrụ na-abawanye ego site na ịhapụ ndị na-azụ ahịa ka ha lelee ihe niile dị na nke ọ bụla ngwakọta ngwaahịa, ma na-agagharị na ịzụta ihe n'otu n'otu ma ọ bụ n'otu.
Ma lee broshuọ ngwaahịa ngwaahịa a - na onye na-ekiri ya. Hụ na ịpịrị bọtịnụ aka ekpe aka ekpe iji lee ihuenyo zuru oke!
Tags: mbipụta dijitalụecommerceịzụ ahịa n'ịntanetịpdfnjikwa pdf